Restaurant POS system | Waiterio Restaurant Nzvimbo yekutengesa
Restaurant POS systemMahotera webhusaiti anovakaBlogZvinyorwaMutengoDownloadsLoginEdza izvozvi
Restaurant POS systemMahotera webhusaiti anovaka
Kura nzvimbo yako yekudyira nekugutsikana
Waiterio inoita kuti zvive nyore kubata mairairo eresitorendi nemabhawa
Tsvaira kuraira kwekudyira mumatanho mashanu akareruka
Waiterio inounza pamwechete vashandi vekudya nekutaurirana kwakanaka
Iyo yekumirira inopinda yevatengi kurongeka mune iyo Waiterio app (inowanikwa pane chero mudziyo).
Cheki anogadzirira odhi inogamuchirwa kubva kune inopurinda inopisa kana yekuratidzira yekicheni.
Cheki yacho inomaka runyorwa seyakagadzirira uye murume anomirira anounza kutafura yemutengi.
Anoshandira anodhinda risiti uye anobvuma kubhadharwa nemari kana kadhi.
Iwe unogona kukanzura uye kugadzirisa zvakare kunyorera kwako kumashure chero iwe paunenge uchida zvakananga kubva kuapp. Yako yese data icharamba yakachengeteka.
Tarisa uwane uwane uye uwane kuti ndedzipi ndiro dzinoita huru uye ndedzipi dzinofanira kubviswa kubva kumenu.
Koka vamwe vako kuti vashandise Waiterio saka mirairo uye menyu zvinogovaniswa.
Waiterio inotsigira ese anodhinda anodhinda. Makwikwi mazhinji anotsigira chete kana chete maviri ma brand ekumanikidza kuti utenge zvinodhura zvemahara.
Waiterio inobatsira kugashira kubhadhara kwakasiyana kubva kune vatengi vanoshandisa nzira dzakasiyana dzekubhadhara.
Unogona kuishandisa piritsi, smartphone, tv, laptop uye desktop komputa. Waiterio inoshanda pane ese anoshanda masystem senge Android, iOS, Windows, macOS uye Linux.
Vatengi vanofara 305
Active account 4125
Edza iyi inotyisa kurongeka manejimendi system yemahara. Iwe unogona kuwedzera anosvika zana mairairo pamwedzi paunenge uchishandisa software iyi yemahara. Iyo app inowanikwa yeAroid, iOS, Windows, macOS uye Linux. Iwe unogona kushandisa ino yePoint yekutengesa system pane chero piritsi, smartphone, tv, laptop uye desktop komputa.
Izvo zvinokurumidza uye zvakananga kuisa uye kuseta iyo Waiterio POS yeresitorendi yako. Zvese zvaunoda kuti utange kero yeemail uye chishandiso chine internet internet.
Vanodiwa nevatengi vedu
App iyi yakabatsira yangu diki cafe kumhanya zvinobudirira uye mushe.
Waiterio akavandudza nzira yangu yekuraira yekudyira. Kukosha kukuru kwemari.
Kwakareruka kwazvo kumisikidza uye kunoteerera zvikuru. Kunyangwe vanobika veresitorendi yangu seizvi.
Edza programu iyi mahara. Iwe unogona kuwedzera anosvika zana mairairo pamwedzi apo uchishandisa iyo app yemahara. Iwe unogona kunyorera kune chero echirongwa chinotevera kutora mamwe mairairo:
100 Mirairo Pamwedzi
300 Mirairo Pamwedzi
600 Mirairo Pamwedzi
1000 Mirairo Pamwedzi
1500 Mirairo Pamwedzi
∞ Mirairo Pamwedzi
Verenga iyo yasara yemubvunzo